Development nhoroondo - Xizi erevheta Co., Ltd
XIZI anotakura mberi quintessence kuti erevheta kukura Pfungwa makore zana, nhaka zviitiko uye ruzivo pamusoro erevheta indasitiri vanopfuura 30 makore, zvimiti kuti inogona kuenderera utsanzi uye nguva dzose anorambira akazvitsaurira, specialized uye concentrative mafungiro basa kukura.
Kwemakore, neimwe nguva vepachokwadi kugwinha maoko pamwe mutengi, neimwe nguva pedyo pamwe vatengi .... Zvose uchapupu XIZI kuti pachine. Ndizvo chaizvo nokuti kunyemwerera ose nguva zvechokwadi, XIZI rave akakurumidza kuona nangananga achisiya pachikuva vokune mumhuri kumusika.
Kuunganidza mukuru matarenda pamusoro zvebhizimisi mashandiro uye kutarisirwa, nyanzvi vomuzana zvazvingava revatema yokutengesa matarenda, simba tsvakurudzo chigadzirwa uye kukura matarenda uyewo ruzivo rwokugadzira uye kuvakwa matarenda, XIZI chikwata achivimba kuti aunze kunyemwerera dzakavimbika rose.
Muna 2016, vakabudirira akatanga siyana zvigadzirwa zvitsva, kusanganisira Disc mhando Ultra-dzakatetepa injini uye Victor MRL (T) erevheta pamwe muchina kamuri, XEC-6000 kuzvidzora-nemotokari revatema akachengeteka escalator.
Muna 2015, XIZI Industrial Park ndokupenya indasitiri, paakavapa musoro pamusoro-100 zvebhizimisi munyika Zhejiang Province.
Muna 1997, XIZI Otis erevheta Co., Ltd. akanga pamutemo makazviteya.
Muna 1996, "XIZI" akasvetuka No. 1 National muchiso mudzimai kumusika.
Muna 1993, XIZI aivigirwa izvozvo kutanga erevheta kuVietnam.
Muna 1981, XIZI erevheta akanga pamutemo makazviteya.